SADC Inoti Zimbabwe Ngaichinje Zuva reSarudzo
Chikumi 15, 2013
WASHINGTON — Vatungamiri venyika dzemuSADC vabuda nechisungo chekuti Zimbabwe ikumbire dare repamusoro soro kuti riwedzere nguva dzinofanirwa kuitwa sarudzo.
Munyori weSADC, VaTomaz Salamao, vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekunzwa mativi ose pagakava remuZimbabwe.
Mugwaro raburitswa neSADC mushure memusangano waitirwa muMaputo, Mozambique, neMugovera, SADC inoti inoremekedza mitongo yematare enyika.
SADC inotiwo kunyange hazvo ichiremekedza mitemo yematare, yaona zvakakodzera kuti hurumende yeZimbabwe idzokere kumatare yokumbira nguva yekuita sarudzo, kwete kuti dziitwe musi wa Chikunguru 31, sezvakange zvatarwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nemutongo wedare repamusoro soro.
Danho ratorwa neSADC rinorasa zvakanga zvaitwa naVaMugabe, richitsigira danho rakatorwa neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, iyo yakati zuva rakatarwa naVaMugabe sezuva resarudzo, rakanga risingaite nekuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa.
VaTsvangirai vanoti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo, mashandiro emauto nemapurisa, pamwe nekuona kuti vanhu vose vanokodzera kuvhota, vanyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo.
VaTsvangirai vanoti zvakare VaMugabe vanosungirwa kugara navo ivo VaTsvangirai pasi, vowirirana zuva rinofanirwa kuitwa sarudzo, kwete kuita humbimbindoga hwakaitwa naVaMugabe apo vakatara zuva resarudzo nemusi eChishanu.
VaMugabe vanoti vakaita izvi vachishandisa mitemo inovapa masimba ekuita izvi semutungamiri wenyika. VaMugabe vanga vachitsigirwa nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, avo vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa musi wakatarwa nemutungamiri wenyika vachitevedza zvakatarwa nedare repamusoro soro.
Asi MDC-T, ichitsigirwa neMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, yakati zvakaitwa naVaMugabe zvaityora bumbiro remitemo, pamwe nechibvumirano cheezvematongerwo enyika, cheGlobal Political Agreement, icho chakavaka hurumende yemubatanidzwa iripo.
Ukuwo nyanzvi munyaya dzemitemo, uye vari sachigaro ve National Constitutional Assembly, Va Lovemore Madhuku, vanoti zvakaitwa naVaMugabe zvaiva pamutemo.